म्याट ब्ल्याक पुल डाउन किचनको नल
घर / भान्साको नल / नल तान्नुहोस् / WOWOW मैट कालो पुल-डाउन स्प्रे किचन नल
उत्कृष्ट गुणवत्ताको साथ मैट कालो रसोईको नल
२००OW पछि WOWOW सँगसँगै राम्रो जोडी कालो पुल डाउन किचेन फाल बनाउनको लागि औद्योगिक अनुभव छ। निस्सन्देह, यस अनुभवलाई WOWOW को पुल डाउन किचन नलको कार्यक्षमता र डिजाइनमा विधिवत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस अनुभवको नतिजाको रूपमा तपाईको भान्छामा उत्तम गुणस्तरको नल रहेको सुनिश्चित गरिएको छ, अधिकतम कार्यक्षमताका लागि डिजाइन गरिएको र अन्तमा एक विशिष्ट डिजाइनको साथ। यस कारणका लागि, यो उच्च चाप जोडी कालो पुल तल कुचिनको नल WOWOW को सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो जब तपाईं आफ्नो किचन डिजाईन वा पुनः डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
२2310700१०BI०० स्थापना रद्द निर्देशनहरू
WowOW पुल डाउन किचेन faucets 2310700B
भान्साकोठा तपाईंको घरको खाली स्थान हुन सक्छ जहाँ तपाईं आफ्नो समयको अधिकांश खर्च गर्नुहुन्छ। तपाईको खाना पकाउने ठाउँ भान्साकोठा मात्र होईन। थप रूपमा, धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन भान्साको वरपर केन्द्रित गरेका छन्। खाना को मा उदाहरण को लागी विचार गर्नुहोस् जहाँ एक ठूलो भोजन तालिका संग खाना बनाइएको छ। तपाईंसँग जे जस्तो भान्साकोठा छ, डिजाइन र कार्यक्षमता यसका दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। जब तपाईं आफ्नो सपनाको भान्साको डिजाईन वा पुनः डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं ठूलो प्रभाव पार्न चाहानुहुन्छ। भान्छाको नलको छनौट परिणामस्वरूप धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जे होस् भान्साको नल सानो हुन सक्छ, तिनीहरू कुनै पनि भान्छाको प्राकृतिक केन्द्र बिन्दु हुन्। व्यक्तिहरूको दृश्यात्मक रूपले भान्साको नलमा आकर्षित हुन्छ। तसर्थ तपाईं निश्चित रूपमा WOWOW को उच्च चाप मैट कालो पुल तल भान्साको नलको साथ एक प्रभाव पार्नुहुनेछ! WOWOW मैट कालो पुल डाउन किचनको नलले एक उच्च गुणस्तर पुल डाउन किचनको नल प्रदान गर्दछ उत्कृष्ट डिजाइनको साथ एक प्रभावकारी कम मूल्यमा। तसर्थ यस म्याट कालो पुल तल किचनको नलले तपाईंलाई उत्कृष्ट मूल्य-प्रदर्शन अनुपात प्रदान गर्दछ जुन तपाईं बजारमा फेला पार्नुहुनेछ।
स्टाइलिश डिजाइनले मैट कालोमा किचेनको नल तल तान्दछ
WOWOW को उच्च चाप मैट कालो पुल डाउन किचनको नल शास्त्रीय प्रेरित डिजाइनको साथ चित्रित छ जुन आधुनिक शैलीको विवरणको साथ नविकरण गरिएको थियो। यस कारणका लागि, यस भान्साको नल लगभग कुनै पनि भान्छामा भव्यता को एक स्पर्श थप्न छ। स्पष्ट रूपमा तपाईंले आफ्नो भान्साको नल राम्रोसँग चयन गर्नुपर्नेछ। एक तरीकाले कि यो तपाइँको रसोई डिजाइन को बाँकी संग एक harmonic एकता गठन गर्दछ। यस म्याट कालो पुल डाउन किचनको नलको फाइदा भनेको परम्परागत डिजाइनहरू, साथै आधुनिक भान्सा डिजाइनहरूका साथ संयोजन गर्न सकिन्छ। जे भए पनि, WOWOW को म्याट कालो पुल डाउन किचेनको नलले लगभग कुनै पनि भान्छामा अचम्मित गर्ने टचको ग्यारेन्टी गर्नेछ। यो gooseneck म्याट मात्र कालो रसोईको नल तपाईं एक minimalistic डिजाइन प्रस्ताव गर्दछ। सरलता यस डिजाइन भान्छा नल को एक प्रमुख सुविधाहरु हो। जे होस्, यसले शैलीको संयोजन र विचित्र संयोजनको साथ एक नाटकीय डिजाइन कथन प्रदान गर्दछ। इमान्दार हुन, WOWOW मा हामी यस म्याट कालो पुल डाउन किचनको नलको विचार गर्छौं कलाको एक टुक्रा! हामी निश्चित छौं कि जब तपाईले आफैंको भान्साकोठामा यो पुल-डाउन भान्साको नल लागू गर्नुहुन्छ, यसले तपाईको आगन्तुकहरूको अनौंठो प्रतिक्रिया दिनेछ।
तपाईको भान्साकोठामा अधिकतम कार्यक्षमताका साथ मेट कालो तल नल
डिजाईन एक हो, तर यसको अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण एउटा भान्छाको नलको कार्यक्षमता हो। जब तपाइँ तपाइँको कुञ्जीपाटीमा एडिजाइनमा हुनुहुन्छ, एक हो, तर यसबाहेक महत्त्वपूर्ण कुचिनको नलको कार्यक्षमता हो। जब तपाईं एक दैनिक आधारमा तपाइँको भान्सामा हुनुहुन्छ, अचम्मको पाक रचनाहरू तयार गर्दै, तपाइँ खाना पकाउँदा र पछि सफा गर्दा तपाइँलाई समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईले एउटा भान्छाको नल छान्नु पर्छ जसले किचनको सबै प्रकारका कार्यहरूको बारेमा तपाइँको इच्छालाई समर्थन गर्दछ। WOWOW को उच्च चाप मैट कालो पुल डाउन किचनको नल तपाईंलाई अधिकतम कार्यक्षमता प्रस्ताव गर्न डिजाइन गरिएको थियो। कुनै चीजको लागि होईन, म्याट कालो पुल डाउन किचेनको नल बजारमा किचेनको नललाई सबैभन्दा कार्यान्वयनको रूपमा मानिन्छ। यस म्याट कालो भान्छाको नलको पुल-डाउन भाग असाधारण रूपमा कार्य गर्दछ। सबै भन्दा पहिले, तपाईं सजिलै बाहिर खींच्न सक्नुहुन्छ retreting स्प्रेयर हेड आफ्नो किचन सिंक को सबै भागहरु लाई सफा गर्न को लागी। टाउको तान-डाउन प्रयोग गरेपछि, यसले सजीलै आफैंको मूल स्थितिमा फिर्ता लिनेछ। यसका साथै तपाई आरामसँग नरम र हार्ड स्प्रे बीच स्विच गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको भान्साको कार्य अनुसार। म्याट ब्ल्याक पुल डाउन किचेनको नलको कुञ्जी एडाप्टरले अन्तमा तपाईंलाई चाहिने लचिलोपन प्रदान गर्दछ।
स्टेनलेस स्टील मैट कालो पुल तल भान्छाको नल
WOWOW को म्याट कालो पुल डाउन किचनको नल स्टेनलेस स्टील र अन्य उच्च-गुणस्तरका सामग्रीहरूले बनेको छ। यो पुल-डाउन भान्साको नल स्क्र्याच-प्रतिरोधी मात्र नभई खिया प्रतिरोधी र दाग-प्रतिरोधी पनि छ। WOWOW मैट कालो पुल तल भान्साको नल सफा गर्न को लागी सजीलो छ। सजिलो स्वाइपले सबै खनिज अवशेष र चकलाई हटाउनेछ जुन सिलिकॉन टाउकोमा निर्माण गर्दछ। भान्साको नल आफै सफा गर्न सजिलो छ र दाग यसको साथ जोडिने छैन। तपाईको म्याट कालो किचनको नलको बारम्बार सफा गरिएमा लामो जीवन धैर्य ग्यारेन्टी हुन्छ उच्च चाप मैट कालो तल WOWOW को भान्साको नल तान्न स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ र स्पष्ट स्थापना निर्देशन संग आउँछ। जसरी यसले forward ० डिग्री अगाडि कताईलाई प्रबन्ध गर्दछ, यसले तपाईंलाई कडा क्षेत्रमा कुनै पनि आवश्यक काउन्टर क्लियरन्सको बिना, कडा क्षेत्रमा यो म्याट कालो किचन किलको नल स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। यसैले WOWOW का डिजाइनकर्ताहरूले यस म्याट कालो पुल डाउन किचेनको नल डिजाइन गर्ने लगभग सबै चीजको बारेमा सोच्दछन्। त्यसकारण WOWOW तपाईंलाई यसको जोडी कालो पुल डाउन किचनको नलमा तीन-वर्ष वारंटी प्रस्ताव गर्न डराउँदैन। हामी हाम्रा उत्पादनहरूको गुणस्तर बारे निश्चित छौं र ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाईंको अधिकतम आराम हुनेछ र हाम्रा उत्पादनहरूले उनीहरू अधिकतममा प्रदर्शन गर्दछन्। जब कुनै पनि कारणका लागि यो भान्साको नलले काम नगर्न सक्छ जुन तपाईं हामीबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ, हामी तपाईंको लागि कुनै अतिरिक्त लागतमा उत्पादन प्रतिस्थापन गर्नेछौं। अन्तमा, हामी 90 ०-दिनको निःशुल्क रिटर्न नीति प्रस्ताव गर्छौं यदि मैट कालो रसोईको नल तपाईंले सोचे जस्तो हुन सक्दैन। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हामी हाम्रो जोडी कालो पनी डाउन किचेन नलमा भरोसा गर्छौं। फलस्वरूप हामी केवल तपाईले १००% सन्तुष्ट भएको आशा गर्न सक्दछौं!
संक्षेप मा WOWOW उच्च चाप दोस्त कालो पुल तल भान्साको नल को लाभ:
क्लासिक र आधुनिक डिजाइनको अनुपम संयोजन
तपाइँको आवश्यकताहरु मिल्छ कि उत्तम कार्यक्षमता प्रस्ताव गर्दछ
उच्च प्रदर्शनको साथ एस्टेटिक्स संयोजन गर्दछ
यस उच्च चाप मैटे कालो पुल डाउन किचनको नलमा3बर्षे वारंटी
SKU: 2310700B विभाग: भान्साको नल, नल तान्नुहोस् टैग: उच्च चाप, म्याट ब्ल्याक, तल तान्नु
२.2.6 केजी = 5.7320२० एलबी = .91.7123 १..XNUMX११२XNUMX ओज